တိုင်စာပစ်စာလေ့လာဆန်းစစ်ရေး အဖွဲ့ | Kayah State Hluttaw
ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ် လွှတ်တော် ဖွဲ့စည်းခြင်း
ဒုတိယအကြိမ် အထူး အစည်းအဝေးများ
ဒုတိယအကြိမ် အရေးပေါ် အစည်းအဝေးများ
ပထမအကြိမ် ပုံမှန် အစည်းအဝေးများ
ပထမအကြိမ် အထူး အစည်းအဝေးများ
ပထမအကြိမ် အရေးပေါ် အစည်းအဝေးများ
ပြည်တွင်း၊ပြည်ပမှ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်
အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်
ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်
ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဉီးချင်းဆီ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် များ
တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအရေး ဆိုင်ရာကော်မတီ
အစိုးရအာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ
ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းသာယာ ရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ
ပထမအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ဥပဒေများ
ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သောဥပဒေများ
အကြောင်းအရာ။ တိုင်စာပစ်စာလေ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း
၁။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ကယားပြည်နယ် လွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၆) (ဒုတိယနေ့) အစည်းအဝေးအတည်ပြုချက်အရ တိုင်စာပစ်စာလေ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့ကို အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်လိုက်သည်-
ဦးအောင်နိုင်ဦး ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးမြင့်အုန်း ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့ဝင်
ဦးစောကလိုမူး အင်ဂျင်နီယာအသင်းဥက္ကဋ္ဌ အဖွဲ့ဝင်
ဦးဘန်ဒီ ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့ဝင်
ဦးစိန်ဝင်း ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့ဝင်
ဦးနေထွန်း ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့ဝင်
ဦးစိုးမြင့် ဆည်မြောင်းအင်ဂျင်နီယာ(ငြိမ်း) အဖွဲ့ဝင်
ဦးမောင်မောင်ထွန်း ကားပိုင်ရှင် အဖွဲ့ဝင်
ဦးမြင့်မောင် ထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်သူများဘက်စုံ ဝန်ဆောင်ရေး အတွင်းရေးမှူး
၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ တိုင်စာပစ်စာလေ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ သက်တမ်း၊ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် နှင့် ရပိုင်ခွင့်တို့ကို ပူးတွဲပါအတိုင်းပေးပို့ပါသည်။
အကြောင်းအရာ။ တိုင်စာပစ်စာလေ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့အား ပြင်ဆင်ဖွဲ့ စည်းတာဝန် ပေးအပ်ခြင်း
၁။ တိုင်စာပစ်စာလေ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့ကို (၁၆-၁၁-၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြု လုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် အဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့) အတည်ပြုချက် အရ အဖွဲ့ဝင် (၂၆)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သော်လည်း၊ (၄-၁၀-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် အစည်းအဝေး (ပထမနေ့) အတည်ပြုချက်အရ အဖွဲ့ဝင် (၂၁)ဦးဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
၂။ ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေအပိုဒ် ၆၂ (ခ)အရ ကော်မတီနှင့် အဖွဲ့များ၏ သက်တမ်းအား (၁)နှစ် သတ်မှတ်ခဲ့ရာ (၁၆-၁၁-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် တိုင်စာပစ်စာ လေ့လာဆန်းစစ် ရေးအဖွဲ့၏ သက်တမ်းမှာ (၁)နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၃။ ကော်မတီသက်တမ်း(၁)နှစ်ပြည့်ပြီးဖြစ်၍ (၆-၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဒုတိယနေ့) အတည်ပြုချက်ဖြင့် တိုင်စာပစ်စာလေ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့ကို သက်တမ်း (၁)နှစ် တိုးမြှင့် သတ်မှတ်လိုက်သည်။
၁။ တိုင်စာပစ်စာလေ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့ကို (၆-၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၂)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဒုတိယနေ့) အတည်ပြုချက်အရ အဖွဲ့ဝင်(၁၈)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကယား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၂ (ခ)အရ ကော်မတီနှင့် အဖွဲ့များ၏ သက်တမ်းအား (၁)နှစ် သတ်မှတ်ခဲ့ရာ (၆-၂-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် တိုင်စာပစ်စာလေ့လာ ဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့၏ သက်တမ်းမှာ (၁)နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂။ အဖွဲ့၏သက်တမ်း (၁)နှစ်ပြည့်ပြီးဖြစ်၍ (၁၄-၂-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဒုတိယအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၆)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဒုတိယနေ့) အတည်ပြုချက်ဖြင့် တိုင်စာပစ်စာလေ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့ကို သက်တမ်း(၁)နှစ်တိုးမြှင့် သတ်မှတ်လိုက်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်လိုက်သည်-
၁။ အဖွဲ့၏သက်တမ်းကို စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်နေ့မှစ၍ တစ်နှစ်သတ်မှတ်သည်။အဖွဲ့ဝင်များ၏ သက်တမ်း(၁)နှစ် ပြည့်မြောက်သည့်အခါ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသည် ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်ပါက သင့်လျော်သလို လဲလှယ်အစားထိုး တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦး သည် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် နှုတ်ထွက်ခြင်း၊ အဖွဲ့ဝင်ထပ်မံဖြည့် တင်းခြင်းများကို ပြည်နယ် လွှတ်တော်နည်းဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လွှတ်တော်အတည်ပြုချက်ရယူ ဆောင် ရွက်ရမည်။
၂။ အဖွဲ့၏ တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –
(က) နိုင်ငံသားတိုင်း တန်းတူညီမျှမှုအခွင့်အရေး၊ တရားမျှတမှုအခွင့်အရေးတို့ ခံစားခွင့်ရှိရေး တို့ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်၊
( ခ ) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် တန်းတူညီမျှမှုအခွင့်အရေး၊ လွတ်လပ်မှုအခွင့်အရေး၊ တရားမျှတမှုအခွင့်အရေးတို့ကို နိုင်ငံသားတိုင်းခံစားနိုင်ရေးအတွက် အားပေးကူညီရမည်၊
( ဂ ) နိုင်ငံသားများ၏အခွင့်အရေးများ မှန်ကန်စွာရရှိစေရေးအတွက် စိစစ်ကူညီ
(ဃ) ပြည်သူ့များ၏ တိုင်စာပစ်စာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊
ကွဲလွဲမှုများရှိပါက စိစစ်ခြင်း၊ အကြံပြုတင်ပြခြင်း၊
( င ) အဖွဲ့သည် ပြည်နယ်အဆင့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်နယ်အဆင့်ဌာဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း များ၏ တိုင်စာပစ်စာများကိုစိစစ်ရမည်။
(စ)စိစစ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကို သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ အကြံပြုတင်ပြ
(ဆ) ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်နှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှ အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သောတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ဇ) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ အခါအားလျော်စွာ
(စျ) အဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးပြောဆိုသော သို့မဟုတ် ပြုလုပ်သောကိစ္စကို သော်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့တွင်ဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များကို လည်းကောင်း ပြင်ပသို့ ပေါက်ကြားခြင်းမရှိစေရ။အဖွဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင်ဆွေးနွေးချက်အားကို အသေးစိတ် မှတ်တမ်းတင်၍ အဖွဲ့ကအတည်ပြုထားရမည်။ ယင်းအစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများကို ဖြန့်ဝေ ခြင်းမပြုရ။ လွှတ်တော်သို့ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာမိတ္တူကိုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများနှင့် အတူပူးတွဲ၍ အမှုတွဲအဖြစ် တစ်ပေါင်းတည်းထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် လွှတ်တော်ရုံးသို့ ပေးပို့ရ မည်။
၃။ အဖွဲ့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –
(က) အဖွဲ့အစည်းအဝေးများကို တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်၊
( ခ ) အဖွဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် သက်ဆိုင်သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းများအား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးမှတဆင့် ဖိတ်ကြားနိုင်သည်၊
( ဂ ) လိုအပ်သောအချက်အလက်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများထံတွင် ခွင့်ပြု ချက်များနှင့်အညီ တင်ပြတောင်းခံနိုင်သည်၊
(ဃ) အဖွဲ့သို့တင်ပြသော ပြည်သူလူထုတို့၏တင်ပြချက်များကို ပြန်လည်စိစစ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ချက်များ၊ အကြံပြုချက်များကို ပြန်လည်ပေးပို့နိုင် သည်၊
( င ) အဖွဲ့သည် မိမိတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရာတွင် အကြံဉာဏ်နှင့် အကူအညီများကို သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များမှ လည်းကောင်း၊ ပြင်ပ ပညာရှင်များ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များထံမှလည်းကောင်း ရယူဆောင်ရွက်နိုင်သည်၊
(စ) အဖွဲ့၏အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစီရင်ခံစာကို ဆွေးနွေးစဉ်းစား ပြီးသောအခါ အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် အတွင်းရေးမှူးကသော်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကသော်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့၏အစီရင်ခံစာ ကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်က သဘောတူလက်ခံရန် အဆိုတင်သွင်းရမည်၊
( ဆ ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တိုင်းဒေသကြီး
(သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည်၊
( ဇ ) အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန်အတွက် ခိုင်လုံသောအကျိုးအကြောင်းဖော်ပြချက် ကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၄။ အဖွဲ့၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့်အခွင့်အရေးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –
(က) အဖွဲ့ဝင်များသည် အဖွဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့အစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန်ဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့ရုံးစိုက်ရာဒေသတွင် ရောက်ရှိနေစဉ်၌လည်းကောင်း၊ တာဝန်အရ ခရီးသွားလာရာ၌လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့် ရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားခွင့်ရှိမည်၊
(ခ) အဖွဲ့အစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြဆွေးနွေးချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေမှအပ အခြားဥပဒေအရ အရေးယူခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊
( ဂ ) အဖွဲ့အစည်းအဝေး တက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏ အကြီးအမှူးမှတဆင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိပါက ဖမ်းဆီးခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်၊
(ဃ) ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါက ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရမီ ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အဖွဲ့အစည်းအဝေးများကို တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။
အဖွဲ့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –
(က) အဖွဲ့အစည်းအဝေးများကို တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်၊
( င ) အဖွဲ့သည် မိမိတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရာတွင် အကြံဉာဏ်နှင့် အကူအညီများကို သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များမှ လည်းကောင်း၊ ပြင်ပပညာရှင်များ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ လည်းကောင်း ရယူဆောင်ရွက်နိုင်သည်၊
(စ) အဖွဲ့၏အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစီရင်ခံစာကို ဆွေးနွေးစဉ်းစား ပြီးသောအခါ အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမရှိလျှင် အတွင်းရေးမှူးကသော်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးမရှိလျှင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကသော်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့၏အစီရင်ခံစာကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်က သဘောတူလက်ခံရန် အဆိုတင်သွင်းရမည်၊
(ဆ ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည်၊
( ဇ ) အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန်အတွက် ခိုင်လုံသောအကျိုးအကြောင်း
ဖော်ပြချက်ကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
တိုင်စာပစ်စာလေ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့ ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပုံစံ(အကျဉ်း)
၁။ အမည် ၊ ဦးအောင်နိုင်ဦး
၂။ အခြားအမည် ၊ –
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ၊ ကရင်/ ဗုဒ္ဓဘာသာ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၊ ၂/ ဝခမ(နိုင်)၀၀၀၃၆၉
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၊ ၁၉၇၁ခုနှစ်၊ (၄၄)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ကျိုက္ကဆံရပ်ကွက်၊
၇။ ပညာအရည်အချင်း ၊ အဋ္ဌမတန်း
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ၊ –
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ (ဦးသန်းဦး)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ (ဒေါ်တင်နွဲ့)
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ နော်အယ်(လ်)နာ၊ မှီခို
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ပြည့်စုံအောင်၊ ကျောင်းသား
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ၊ ဝေပါလန်ကျေးရွာ၊မယ်စဲ့မြို့နယ်
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ် ၊ ၀၉-၄၅၂၆၉၄၁၄၁
၁။ အမည် ၊ ဦးမောင်မောင်ထွန်း
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ၊ ဗမာ/ ဗုဒ္ဓဘာသာ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၊ ၉/ ပမန(နိုင်)၀၁၇၁၈၉
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၊ ၂၀-၁၁-၁၉၅၉ (၅၇)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ပျဉ်းမနား
၇။ ပညာအရည်အချင်း ၊ အေဂျီတီအိုင် (မြို့ပြ)
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ၊ ၁၉၈၁ လ/ထ ညွှန်မှူး(နည်းပညာ)
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ (ဦးထွန်းရီ) တောအုပ်၊သစ်တောဦးစီး
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ (ဒေါ်အေးတင်)
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်အိအိခင်၊ ဦးစီးအရာရှိ (နည်းပညာ)
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ကောင်းမြတ်သူ၊ ဒုနှစ်(ဘူမိ)၊
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ၊ ဒေါ-၂၀၊ ဇော်ဂျီလမ်း၊ ဒေါတမရပ်ကွက်၊
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ် ၊ ၀၉- ၅၆၀၀၄၈၀
၁။ အမည် ၊ ဦးစိန်ဝင်း
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ၊ အင်း/တရုတ် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၊ ၂/လကန(နိုင်)၀၄၅၁၂၆
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၊ ၁၃-၁၂-၁၉၆၃
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ လွိုင်ကော်မြို့
၇။ ပညာအရည်အချင်း ၊ စတုတ္ထနှစ်၊ ရူပဗေဒ
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ၊ ကုန်သည်
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဦးစတာနီ၊ ကုန်သည်
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်ညွန့်စိန်၊ မှီခို
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်လွင်၊ ကုန်သည်
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ မရီရီဦး၊ မလွင်ခိုင်မိုး၊ မအိမွန်သိမ့်
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ၊ က/၆၊ ပိတောက်လမ်း၊ လောဓမ္မရပ်ကွက်၊
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ် ၊ ၀၉-၇၈၈၈၈၉၈၈၈
၁။ အမည် ၊ ဦးဘန်ဒီ
၂။ အခြားအမည် ၊ မရှိ
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ၊ ဟိန္ဒူ / ဗုဒ္ဓ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၊ ၂/လကန(နိုင်) ၀၄၄၈၅၃
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၊ ၂၀-၁၂-၁၉၆၆ (၅၀)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ သံတွဲမြို့
၇။ ပညာအရည်အချင်း ၊ B.Sc (Zool)
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ (ဦးမိုဟင်းဒါး)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ (ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း)
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ မရှိ
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ မရှိ
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ၊ ရှမ်း/၁၀၂၊ နဝရတ်လမ်း၊ ရှမ်းစုရပ်ကွက်၊
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ် ၊ ၀၉-၅၆၀၀၅၀၅၊ ၀၈၃-၂၁၃၂၉
၁။ အမည် ၊ ဦးနေထွန်း
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ၊ ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၊ ၂/လကန(နိုင်)၀၁၇၇၁၈
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၊ ၁၂-၁၂-၁၉၆၀
၇။ ပညာအရည်အချင်း ၊ နဝမတန်းအောင်
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ၊ အထွေထွေစက်မှုလုပ်ငန်း
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဦးမောင်မောင်၊ ထွေ/အုပ်အလုပ်ရုံမှူး
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ကွယ်လွန်
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်ဌေးဌေးမြင့်၊ မှီခို
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဦးစိုးလင်းထွန်း+ဒေါ်နွယ်နွယ်ခိုင်(ကုန်သည်)
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ၊ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့၊
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ် ၊ ၀၉-၄၂၀၀၀၂၂၇၆၊ ၀၈၃-၂၁၂၅၀
၁။ အမည် ၊ ဦးမြင့်အုန်း
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ၊ ဗမာ၊ တရုတ်/ ဗုဒ္ဓ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၊ ၂/လကန(နိုင်) ၀၄၅၅၄၈
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၊ ၁၆-၂-၁၉၆၂
၇။ ပညာအရည်အချင်း ၊ (၁၀)တန်း
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ၊ မြင့်ဆေးဆိုင်
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဦးအုန်းရွှေ
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်စမ်း
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်ထွေးလန်၊ မှီခို
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ Dr. ယဉ်အေးငယ်
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ၊ စျ/၆၂၊ သီတာလမ်း၊ စျေးပိုင်းရပ်၊ လွိုင်ကော်မြို့
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ် ၊ ၀၈၃-၂၁၂၂၅
၁။ အမည် ၊ ဦးစောကလိုမူး
၂။ အခြားအမည် ၊ စောသီအိုဒိုလှ
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ၊ ကရင်/ ခရစ်ယာန်
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၊ ၂/လကန(နိုင်) ၀၀၈၆၁၅
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၊ ၁၀-၄-၁၉၄၆ (၇၁နှစ်)
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ သာယာဝတီမြို့
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ၊ ဥက္ကဋ္ဌ-ကယားပြည်နယ်အင်ဂျင်နီယာအသင်းခွဲ
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဦးစံလှ(ကွယ်လွန်)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်ခင်မေ(ကွယ်လွန်)
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ နော်မားဂရက်ဖိုး (အငြိမ်းစား)
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ နော်အယ်ဝါးဖော၊ မှီခို
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ၊ န/၂၆၆၊ ခွန်းလီလမ်း၊ နောင်ယား(က)ရပ်၊
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ် ၊ ၀၉-၄၉၄၀၀၆၆၀၊ ၀၉-၇၈၀၁၂၁၆၃၆
၁။ အမည် ၊ ဦးစိုးမြင့်
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၊ ၂/လကန(နိုင်) ၀၀၉၄၆၀
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၊ ၁၁-၉-၁၉၅၁
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ မိတ္တီလာမြို့
၇။ ပညာအရည်အချင်း ၊ အေ.ဂျီ.တီ.အိုင်(မြို့ပြ)
၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် ၊ ဦးစီးမှူး(ငြိမ်း)၊ ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာန၊
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ (ဦးညို)
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ (ဒေါ်ဖွားယဉ်)
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်မြတိုး၊ မှီခို
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ မောင်ဇာနည်စိုး၊ စိုက်ပျိုးရေး
(Master of Development
University of Wellington၊
မောင်နေထက်စိုး၊ Freelancer Computer
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ၊ က(၁)၊ လောဓမ္မရပ်၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ် ၊ ၀၉-၃၆၁၅၄၂၄၆၊ ၀၈၃-၂၂၄၄၆
၁။ အမည် ၊ ဦးမြင့်မောင်
၃။ လူမျိုး/ဘာသာ ၊ ဗမာ၊ ရှမ်း၊ အင်း/ ဗုဒ္ဓ
၄။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ် ၊ ၂/ လကန(နိုင်) ၀၀၆၅၆၀
၅။ မွေးသက္ကရာဇ်/အသက် ၊ ၂၈-၁၀-၁၉၆၆ (၅၃)နှစ်
၆။ မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ လောပိတ
၇။ ပညာအရည်အချင်း ၊ B.A (ပထဝီ)
၉။ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ (ဦးမြင့်လှိုင်)၊ လျှပ်စစ်ဝန်ထမ်း
၁၀။ အမိအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်အေးညို၊ မှီခို
၁၁။ ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ ဒေါ်ထားရုမို၊ တောင်ယာလုပ်ငန်း
၁၂။ သား/သမီးအမည်၊ အလုပ်အကိုင် ၊ မောင်ဘိုးရယ်မြင့်မောင်၊ စက်မောင်း
(ACTY SOFT WAER COMPANY)
၁၃။ အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ ၊ လောကထူးရွာ၊ လောပိတ
၁၄။ ဖုန်းနံပါတ် ၊ ၀၉၂၆၀၉၀၁၀၀၊ ၀၉၇၈၄၄၁၈၁၅၃
ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ
Copyright © 2020 ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်. All rights reserved..
Web Designer MWS
Kayah State Hluttaw